सानो कुकुर शहरी बासिन्दा को धेरै रुचाउनु छन्। यी सानो प्राणीहरू को रहस्य के हो? यो प्रश्न मा, एक "मिनी-कुकुर" प्रत्येक मालिक विभिन्न तरिकामा प्रतिक्रिया हुनेछ। त्यहाँ सामान्य सम्झौता मात्र एउटा कुरा छ: यी प्यारा पशुहरू धेरै लाभ छ।
सानो कुकुर: नस्ल, नाम
सजावटी चट्टानको तीन समूह विभाजन गर्न सकिन्छ:
- shorthair (ड्याक्शन्ड toyterer, zwergpinschers);
- लामो-haired (मालटिस्, Shih Tzu, पुडल, Pomeranian, योर्कशायर टेरियर, जापानी Chin, Chihuahua, lapdog इटालियन);
- चिनियाँ Crested र मेक्सिकन hairless कुकुर।
साथै, त्यहाँ पनि सजावटी लघु कुकुर, अझै FCI द्वारा पहिचान को एक समूह छ:
- रूसी रंग काखमा कुकुर ;
- स्यालले टेरियर को अमेरिकी;
- अर्किड (पीटर्सबर्ग र Neva);
- अमेरिकी Hairless Terrier र अरूलाई।
त्यहाँ एक misconception छ
केही मानिसहरू सानो जात कुकुर एक नाजुक psyche छ भन्ने विश्वास गर्छन्; जनावर मानिन्छ hysterical र कायर। यस्तो कथन आधारित छ जो मा - अज्ञात छ। यो राय बिलकुलै गलत हो भनेर निर्धक्क भन्न सम्भव छ। यस साहसी र विश्वासी सिर्जना, शत्रु को आकार को बिना पछिल्लो सास सम्म आफ्नो मास्टर रक्षा गर्न तयार - यी बच्चाहरु को धेरै। उदाहरणका लागि, सानो टेरियर्स एक वास्तविक "terersky" वर्ण छ। तिनीहरूले यो लक्ष्य प्राप्त गर्न मा, निडर मुखर र सक्रिय छन्।
सानो जातिहरु को लाभ
निस्सन्देह, शहरी dweller लागि यी कुकुर संकुचित र अपार्टमेन्ट मा वस्तुतः कुनै ठाउँ हो भनेर धेरै महत्त्वपूर्ण छ। साथै, तिनीहरूले सजिलै परिवहन को कुनै पनि प्रकारको मा ओसारपसार गर्न सकिन्छ। र सबै भन्दा महत्वपूर्ण: यस्तो सानो आकार संग, तिनीहरूले ठूलो कुकुर को लाभ छ।
यो सानो जात कुकुर छैन इरादा कुनै पनि काम गर्न मात्र प्राकृतिक छ। "खेलौना नस्ल" - तिनीहरूले एक विशेष समूह पर्छन्। अंग्रेजी खेलौना मा - एक खेलौना। पुरातन समयका भएकोले मा नै समय आफ्नो धन र उच्च सामाजिक स्थिति चित्रण गर्छ, तिनीहरूको होस्टहरूको रम्न यी जनावरहरू। एक सानो मित्र जस्तै बनाउन चाहने सबैलाई, एक खेलौना छ तपाईं प्राप्त, तर जीवित रहेको र सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ भनेर थाह हुन। साथै, तपाईँले एउटा भव्य कुकुर र वास्तविक कुकुर आफ्नो चरित्र र स्वभाव संग छैन पहिले त्यो भूल छैन।
आज हामी सुविधाहरू तस्वीर र वर्णन संग कुकुर को सानो जातिहरु केही गर्न परिचय।
सजावटी कुकुर, को XIX सताब्दी मा इङ्गल्याण्ड मा नस्ल। मानव बाल धेरै समान छ जो एक रेशमी र लामो कपाल, द्वारा विशेषता। ऊन निरन्तर बढ्दै र कुनै undercoat छ छ। पशु भन्दा कम तीन किलोग्राम वजन, तर धेरै सानो हुन सक्छ। यस्तो सानो आकार Terrier बेलेम र बोल्ड, आफ्नो ठूलो भाइ जस्ता। उहाँले पूर्ण मालिक समर्पित छ, मान्छे र जनावर मैत्री छन्। यसलाई ध्यान खाँचो छ। आफ्नो काखमा आराम बसिरहेका - सारा दिन आफ्नो एडी मा मास्टर, वा अझ राम्रो पालन गर्न इच्छुक। मूल्य टेरियर पन्ध्र पचास हजार rubles हो।
सायद सबैभन्दा सानो lapdog। नाम जहाँ यो पहिलो 1850 मा पत्ता थियो मेक्सिकोमा चिहुआहुआ को राज्य, सम्मानको थियो। तर, यो यो Aztecs र Mayans को सभ्यताहरू देखि एक प्रकारको छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यसपछि यो सानो प्राणी पवित्र मानिन्थ्यो। छोटो-haired र लामो-haired - यी प्यारा जनावरहरू दुई प्रकारका छन्।
सुरुमा, तिनीहरूले स्पेनी जहाज मा चूहहरुमा पक्रने लागि प्रयोग गरियो, र पछि तिनीहरूले एक साथी कुकुर भयो। चिहुआहुआ उत्कृष्ट प्रतिक्रिया, साहस र धेरै स्थिर psyche छ। यो एक धेरै उत्सुक र सावधान जनावर हो। तरिका तिनीहरू चाँडै तिनीहरूले अतिथि, छैन सामान्य पैदल जाने छ भन्ने महसुस। कुकुर धेरै touchy छन्। तपाईं गरिब विचार गर्न अप्रत्याशित रूपमा एक चिच्याउनु लागि गुलाब कारण हो भने, आफ्नो पाल्तु जनावर तपाईं क्षमा सम्म आफ्नो कुना मा सबै दिन बस्न सक्नुहुन्छ। यो कुकुर को मूल्य पाँच सय देखि दायरा दुई हजार डलर गर्न। यो विभिन्नता जनावर, वंश, शीर्षक को उपस्थिति, र यति आमाबाबुको सेक्स मा निर्भर गर्दछ। डी
रूसी खेलौना टेरियर
, सानो जात कुकुर वर्णन जो तपाईं यस लेखमा देख्न सक्नुहुन्छ फोटो संग, एक रूसी नस्ल को प्रतिनिधि बताउन सक्दैनन्। खेलौना Terrier को XX सताब्दी को शुरुवात मा हाम्रो देश उत्पत्ति। धेरै शिष्ट र असल-boned, लामो-खुट्टे र छोटो-haired सानो कुकुर।
जनावर धेरै सक्रिय, मास्टर समर्पित र उसलाई कोमल छ। कृपया ध्यान दिनुहोस्: हल्ला बच्चाहरु संग पाल्तु जनावर जस्तै खराब सुरुवात परिवार। कुकुर तनाव उजागर गरिएको छ। एक अनुभवी कुकुर ह्यान्डलरहरूको पेशेवर मद्दत बिना धेरै भीषण बढ्न सक्छ। विशेष हेरविचार एउटा सानो घर मा राखन लागि पूर्ण आवश्यकता छैन। मूल्य -635 हजार rubles देखि।
लघु Spitz (Pomeransky)
सजावटी कुकुर जर्मनी ले आउनुहोस्। लघु र हँसिलो कुकुर, अविश्वसनीय वफादार मालिक। उहाँले बच्चाहरु प्रेम गर्नुहुन्छ र नथाकीकन तिनीहरूलाई र प्ले साथ चलाउन सक्नुहुन्छ। चलाख र स्मार्ट, उत्सुक आफ्नो मास्टर खुसी र उहाँको प्रशंसा कमाउन। सजिलै प्रशिक्षित। कुकुर जस्तै को मूल्य 14 हजार rubles देखि सुरु हुन्छ।
नस्ल को फ्रान्सेली नाम बाट अनुवादित अर्थ "घुम्रेको काखमा कुकुर"। स्वाभाविक, यो सौन्दर्य कुकुर को justifiably सानो जातिहरु छ। अविश्वसनीय हडताली गोरा! बाक्लो, लामो, रेशमी कोट (सधैं सेतो मात्र) उनको उपस्थिति अविस्मरणीय बनाउँछ। यो नस्ल सबै lapdogs को पुर्खा छ कि विश्वास छ।
उचाइ bichon Frize, 30 सेमी भन्दा बढी छैन ऊन - 10 सेन्टिमिटर। जनावर धेरै मजा र चंचल छ, कौशल चमत्कार देखाउँदै आक्रमण, सजिलै प्रशिक्षित देखाउन थिएन। मूल्य - 600 1000 डलरसम्म देखि।
चीन देखि मूल सजावटी कुकुर। नस्ल बारेमा 2000 वर्ष इतिहास छ। यो देशको राजधानी आफ्नो नाम owes - बेइजिङ। साँचो, चिनियाँ यी पशुहरू कल फू कुकुर। सायद, Pekingese 1860 मा ब्रिटिश पेकिङ महल जफत गरेको थियो भने, युरोप को देशहरुमा पायो कहिल्यै, एक पदक यो नस्ल पाँच नमूनों लिएको छैन। Pekingese holili र पोषित गर्न रुचि, तर उहाँले निडर र सुन्दर खेल मा आविष्कारशील छ। यसलाई ध्यान धेरै माग। पनि बच्चाहरु संग परिवार मा उहाँले मुख्य पात्र, एकल व्यक्ति वा परिवार छोराछोरीलाई बिना राख्नको लागि त थप उपयुक्त ठान्नुहुन्छ। मूल्य -420 हजार rubles देखि।
सानो कुकुर बांधन
यो प्रक्रिया एकदम जटिल छ र पूर्व तयारी आवश्यक छ। संभोग कुकुर सानो जातिहरु Vaccinations को अनिवार्य उपस्थिति expectant आमा implies। यो किर्नाले र fleas विरुद्ध उपचार गर्नुपर्छ, यो कीडे लागि चिकित्सा को एक मनपर्ने गाउन गर्न मनमोहक छ। जोडी पहिलो पटक हो भने, आफ्नो क्लब मा एक प्रशिक्षक को सल्लाह खोज्न निश्चित हुन। मद्दत व्यवसायीक बिना अनुभवहीन मालिक गर्न सक्नुहुन्छ जब पल्ट गर्दै छन्।
सानो जातिहरु को कुकुर मा गर्भावस्था 62 दिन को एक औसत रहन्छ। जनावर शरीर तापमान को वितरण गर्न तुरुन्त पूर्व गर्न 1-2 ° C पतन र यो स्तर वितरण को अन्त सम्म राखिएको।
गर्भावस्था को समयमा, कुकुर खुवाउने थप पौष्टिक र थप आंशिक हुनुपर्छ। आफ्नो नस्ल लागि आवश्यक भिटामिन, को पशुचिकित्सा सिफारिस गर्नेछ।
Puppies कुकुर को सानो जातिहरु नै ध्यान आवश्यक र अरू सबैलाई रूपमा ख्याल। पहिलो तीन हप्ता समयमा तिनीहरूले पूर्व-पकाएको गुँड आफ्नो आमालाई अर्को छन् र तिनलाई छोडेर लगभग कहिल्यै। यस समयमा यो सुत्केरी आमाले मा केंद्रित।
सानो जात कुकुर लागि उपनाम
यो पहिलो नजर मा देखिन्छ रूपमा आफ्नो पाल्तु जनावर लागि उपनाम चयन गर्न रूपमा सजिलो छ। आफ्नो रुचि गर्दा, कुकुर को नस्ल विचार गर्नुहोस्। एक विशाल Rottweiler वा सानो चिहुआहुआ को सम्बन्ध मा हास्यास्पद उपनाम बल वा वाचडग ध्वनि हुनेछ। एकदम अक्सर पिल्ला पहिले नै पहिलो मालिकबाट यसको नाम हुन्छ, तर यो तपाईं यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन भन्ने होइन।
कुकुर, तर को सानो जातिहरु, साथै ठूलो व्यक्तिहरूलाई सही उपनाम चयन गर्न आवश्यक छ। धेरै हदसम्म कारण पशु को प्रकृति यसलाई गठन गरिएको छ। , हास्यास्पद सुशील र धेरै साधारण - तपाईं कस्तो कुकुर हुनेछ अग्रिम निर्णय। कुकुर - धेरै चतुर जनावर, तिनीहरूले purebred वा mongrel, ठूलो वा सानो हो कि बिना। र, को पाठ्यक्रम, उपनाम जनावर को व्यवहार र चरित्र असर गर्नेछ।
सुँगुर रोग - उपचार र रोकथाम
के उमेर मा कुकुर मा estrus सुरु यो छ रूपमा?
होम्योपैथिक चिकित्सा "Vertigohel": प्रयोगको लागि निर्देशन
Biorevitalization या mesotherapy: जो राम्रो छ। प्रभावकारी प्रतिक्रिया
"टावुश", मनोरञ्जन केन्द्र: विवरण, फोटो
सपना र आफ्नो रूपको प्रकार
कसरी डाटा सुरक्षाका लागि फाइल मा एक पासवर्ड राख्न?
एक कम्पनीको लिक्विडिटी को विश्लेषण